Changi Airport, Singaporo Changi Airport - Singapore
Adiresy: Airport Blvd, Singapore
Phone: +65 06542 1122
Ny telefaona amin'ny serivisy fampahalalam-baovao №1: +65 06541 2267
Teboka amin'ny fampahalalam-baovao # 2: +65 06541 2302
Fax: +65 06542 6990
Ny seranam-piaramanidin'i Changi (Singapore) dia iray amin'ireo fiaramanidina lehibe indrindra any Azia. Mirefy 13 kilometatra kilometatra izy io, ary mirefy 17 kilaometatra avy eo afovoan-tanàna. Ny seranam-piaramanidin'i Changi no fototry ny Singapore Airlines sy mpitondra fiaramanidina hafa ( Singapore Airlines Cargo, Jetstar Asia Airways, SilkAir, sns.). Ny seranam-piaramanidin'i Singapore dia manana terminal 3, eo anelanelan'ny fitaterana Skytrain. Ny faritry ny sehatra fitaterana ho an'ny terminal rehetra dia mahazatra. Ao anatin'ny herinandro dia misy fiaramanidina maherin'ny 4,300 eo ho eo eo amin'ny seranam-piaramanidina 80 miasa eto.
Araka ny fikarohana nataon'ny mpikaroka, Skytrax, ny seranam-piaramanidin'i Changi any Singapour no voalohany tamin'ireo seranam-piaramanidina rehetra manerana izao tontolo izao nandritra ny telo taona, ary talohan'izay dia nibata ny ampahany faharoa amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Hong Kong ny taona maro. Ao amin'ny kaontiny dia misy 400 sangisangy avy amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy fikambanana isan-karazany mahazo ny fikarakarana ny fampiononana sy ny fialana amin'ny mpandeha.
Ny ivon-toeran'ny seranam-piaramanidin'i Changi dia fifehezana sy fanelezana foibe - ny haavony dia 78 metatra, ary androany dia ny teboka miavaka indrindra "manerantany" eto amin'izao tontolo izao. Saingy tsy izany no hany zavatra tokony ho hita ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Changi: mila mijery ny terminal ireo, ary indrindra indrindra ireo faritra miaina ao anatin'izy ireo.
Drafitr'asa fampandrosoana fanampiny
Amin'ny 2017, dia fikasana hanokatra ny terminal faha-4, ary amin'ny tapaky ny 2020 - ny faha-5. Izany dia hampitombo ny fahafahan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Singapore ho 135 tapitrisa. Voalamina fa ny fahafaha-maimaim-poana amin'ny fifandraisana faha-5 ihany dia 50 tapitrisa isan-taona.
Ankoatra izany, tsy ho ela - ny fanokafana ny "Jewel" matanjaka goavam-be iray, izay ahitana ny fivarotana maro, toeram-pialam-boly ary ny fomba fitsaboana isan-karazany.
Any amin'ny seranam-piaramanidina dia afaka misakafo ianao: ho an'ny mpiasan'ny mpandeha maherin'ny 120 samihafa cafes, trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana tsy dia mahafa-po . Eto ianao dia afaka manandrana sakafo avy any an-toerana sy Italiana, Mediterane, Japoney; Afaka mitsidika toeram-pisakafoana trondro koa ny mpitsidika
Raha mihoatra ny 5 ora ny elanelana misy eo anelanelana, dia azonao atao, miaraka amin'ny fanontaniana any amin'ny birao fampahalalam-baovao rehetra, mandehana amin'ny fitsidihana malalaka an'i Singapore. Ny dàlana dia maharitra 2 ora, manomboka amin'ny 9-00, 11-00, 13-00, 15-00, 16-00, 16-30 ary 17-00. Fanoratana ho an'ny dia - 7-00 hatramin'ny 16-30.
Raha mbola kely ny fotoana fiandrasana, dia tsy vitan'ny hoe miala sasatra ihany ianao, fa mandany fotoana sy mahasoa ihany koa:
fitsidihana ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny ambaratonga fahatelo amin'ny Terminal 2;
Mandehana any amin'ny toeram-pisakafoanana (mandoa vola 13 Singapore dollars, azonao atao izany araka izay tianao) eo amin'ny ambaratonga 2 amin'ny terminal 1;
milomano ao amin'ny dobo filalaovana any Balinese; Ny dobo ao amin'ny seranam-piaramanidina Changi dia eo amin'ny laharana 3 terminal 1 - ny fidirana dia 13 Singapore dollar, ny fotoana dia tsy voafetra; afa-tsy ny fahafahana milomano, noho io vola io dia azonao ampiasaina ny jacuzzi sy ny dosy, ary koa misotro zava-pisotro tsy misy alikaola ao amin'ny bar;
ny mametraka ny tenany ho ao amin'ny salon-nasionalin'ny Transpa (ho an'ireo mpitsidika - mpitsabo, manikera ary fitsaboana);
hitsidika ireo trano fialan-tsasatra Plaza Premium Lounge na Rainforest Lounge (simulators, tolotra fanafody, ary koa doucha sy jacuzzi); samy mivoha amin'ny famantaranandro, ny voalohany dia amin'ny ambaratonga 3 amin'ny terminal 2, ny faharoa amin'ny level 3 amin'ny terminal 1;
Manapaha manontolo massage vatana miaraka amin'ny seza massage ao amin'ny OSIM Chair Spa (ny saran'ny fandaharam-potoana maharitra 15 minitra dia 10 dollars Singapore) na ny tongotra fanasan-tongotra - amin'ny fampiasana milina manokana - ao amin'ny Reflexology Foot ny 2 terminal 1 sy 2 (6 am iray amin'ny maraina);
Jereo ny iray amin'ireo zaridaina any amin'ny seranam-piaramanidina.
Ankoatra izany, afaka manafina malalaka ny mozika miaina ianao ary mahita fampisehoana tanteraka amin'ny bara sy café, mianatra ny vaovao momba ny fandriampahalemana sy fanatanjahantena ao amin'ny Level 2 amin'ny Terminal 2 ao amin'ny Skyples Entertainment Center. Ny seranam-piaramanidina ihany koa dia manome fahafahana miditra amin'ny aterineto.
Misy efitrano manokana ao amin'ny efitrano 2 sy 3 amin'ny terminal 1 ary eo amin'ny 2 ambaratonga faharoa amin'ny terminal 2, sy ny Bar's Harry, izay ahafahanao manandrana snacks, toaka fisotroan-dronono, ary ny hariva mihaino mozika mivantana (ilay bar dia ao amin'ny zaridaina kaktoa) . Ao amin'ny seranam-piaramanidina dia misy hotely maromaro miorina any amin'ny laharana faha-3 amin'ny terminal 1 sy 2.
Ny zaridaina kaktis dia miorina eo amin'ny ambaratonga 3 amin'ny Terminal 1, ao amin'ny faritra fitaterana. Eto no ahitanao karazana karazana kakazo sy zavamaniry an-jatony maro - mponina any amin'ny faritra aridran'i Afrika, Amerika ary Azia. Eto ianao dia hahita zavamaniry hafahafa toy ny kakazo "Golden Barrel" sy "Old Old", ary koa ireo goavam-be "Horse Tail"; Misy kakazo sy cacti azo hanina sy cacti izay tsy maty tamin'ny vanim-potoanan'ny dinôzôra. Ny zaridaina koa dia faritra iray ahazoana fifohana sigara.
Ny Garden Sunflower dia miorina eo amin'ny sehatra fahatelo amin'ny Terminal 2. Io dia zaridana misokatra iray izay ahafahanao mahazo ny vitamin D anao amin'ny androany, ary amin'ny alina dia afaka mankafy ny voninkazo eny ambanin'ny tariby manokana. Ny karazana voninkazo maro dia voavoly ao amin'ny garderie an'ny seranam-piaramanidina. Avy any amin'ny zaridainan 'ny voninkazodia no ahitanao ny fomba fijery mahavariana momba ny lalamby.
Ao amin'ny zaridaina dia misy karazana orkide maherin'ny 700 avy amin'ny karazany 30. Izy ireo dia vondron'olona loko sy endriny amin'ny fomba toy izany mba hampiavaka ity na ity singa ity. Ohatra, ny endriky ny tany dia aseho amin'ny sary sokitra avy amin'ny fakan-kazo, miaraka amin'ny orkide mena sy maitso marefo, voninkazo manga sy volkila dia maneho rano, fotsy sy afo ary afo. Ireo dia voninkazo marevaka amin'ny voninkazo mamy mena sy mena. Ny zaridaina dia miorina eo amin'ny sehatra 2 terminal 2. Raha avelan'ny fotoana, dia manoro hevitra ihany koa izahay ny handeha hitsidika ny orkide Orchid , izay ao amin'ny Botanical Garden ao Singapore.
Ny zaridaina bamboo dia misy karazana varimbazaha dimy samihafa, ny anaran'izy ireo dia tsy mampihomehy noho ny zavamaniry. Ohatra, mitombo ny "Bamboo mavo", ary koa ny "Black Bamboo", "Bamboo amin'ny kibon'i Bouddha." Misy zaridaina iray eo amin'ny ambaratonga 2 amin'ny terminal 2.
Ny zaridaina lavitra dia eo am-piandohana 2 amin'ny Terminal 2 - miaraka amin'i Koi Pond. Hahita zavamaniry mahavariana toy ny hazo fern Disconia ianao - ilay hany sisa velona amin'io fianakaviana io, izay mihoatra ny efa-jato taona ny androm-piainany, ary koa ny fatrana amin'ny anarana toy ny "The Rabbit's Foot", "Bird's Nest", "Sword" -fimbika "sy ny hafa.
Ao amin'ny zaridaina, ao amin'ny gorodona faha-3 amin'ny Terminal 3, dia afaka mijery ny famatsiana sy ny fisidinan'ny lolozy ianao, ary indraindray dia manatri-maso ny fizotran'ny feso ho lasa lolozy sy ny sidina voalohany amin'ny hatsaran-tarehy.
Ny zavamaniry Predator koa dia miaina eny amin'ny rihana faharoa amin'ny Terminal No. 3. Ny sakafo dia tsy gazy karbonika, fa bibikely sy biby kely. Ny sasany amin'izy ireo dia manitatra lehibe, toy ny, ny plant "Monkey Bowl" - afaka manangona rano 2 litatra.
Fampahalalana mahasoa hafa
Ny entana maimaim-poana dia entana 20 kg isaky ny mpandeha; Ny entana rehetra amin'io lanjany io dia omena amin'ny fifehezana ny fifehezana. Ankoatra izany, ny mpandeha tsirairay dia afaka mahazo toerana fito ihany (56x36x23). Azonao atao ny manolotra ny entanao any amin'ny efitrano fitehirizana raha ilaina. Tsy azo atao ny manafatra:
vy sy vokatra;
Ny fanafarana ny zava-mahadomelina dia sazin'ny fahafatesana.
Afaka mamoaka maimaim-poana ianao:
1 liter of spirit / beer / wine;
hatramin'ny 200 pcs. sigara;
hatramin'ny 50 pcs. sigara;
ka hatramin'ny 250 g sigara.
Tsy ilaina ny fanekena ny vaksiny. Ny fisoratana anarana amin'ny fiaramanidina dia manomboka amin'ny 2 ora alohan'ny handehanan'ny fiaramanidina; Tsy tokony haharitra antsasak'adiny alohan'ny handehanana ny tany. Raha tsy tafiditra amin'ny vidin'ny tapakilanao ny saram-pidin'ny seranana, dia azonao atao ny mandoa azy mivantana any amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny fotoana fisoratana anarana.
Azonao atao ny miala amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Changi amin'ny fampiasana ireo karazana fitaterana ireo
Taxi, fiara izay hitanao any amin'ny faran'ny fahatongavan'ity terminal ity; Ny diainganina dia mitentina 30 dolara Singapore; dia mandeha antsasak'adiny ny dia.
Ny laharana bus 36, ny fijanonan'izy ireo dia eo amin'ny tany am-pototr'ireo terminal Terminal No. 1, 2 sy 3; Ny halaviran-dalana dia haka adiny iray eo ho eo ary handoa 5 dolara Singaporeana; Ny bus dia mihodina eo anelanelan'ny tanàna sy ny seranam-piaramanidina 6-00 hatramin'ny 24-00.
Ny lamasinina. Ny lalamby East Cost Parkway dia natsangana manokana mba hampifandray ny tanàna amin'ny seranam-piaramanidina; fiarandalamby mandositra any amin'ny biraon'ny ben'ny tanànan'i Singapore; Ny station MRT dia eo anelanelan'ny Terminal No. 2 sy No. 3; Ny tranonkala SBS Transit dia miorina eo akaikin'ny telo amin'ireo terminal.
Maxicab Shattle - taxi ho an'ny olona 6. Ity karazana fitaterana ity dia azo trandrahina any afovoan-tanànan'i Singapore sy any amin'ny manodidina azy (tsy mandeha any amin'ny nosin'i Sentosa) izy ireo, atsaharo ny fangatahana ao amin'ny distrika afovoan-tanàna sy any amin'ny tobim-piantsonan'ny MRT; Ny saran'ny dia dia 11.5 Singapore dollar ho an'ny olon-dehibe ary 7.7 ho an'ny zaza iray, fandoavam-bola amin'ny fandevenana; fotoana fiasana - manomboka amin'ny 6-00 ka hatramin'ny 00-00, ny fizotran'ny hetsika - antsasak'adiny;
Fiara - eo amin'ny làlam-piaramanidina East Coast Parkway; bola amin'ny karatra, izay azo vidiana any amin'ny seranam-piaramanidina na any amin'ny toerana fiantohana fiara .
The Metro . Ao Singapore, ny Metro dia tena maoderina sy haingana indrindra; Ao amin'ny seranam-piaramanidina dia manomboka ny andalana ary afaka mahazo any amin'ny faritra rehetra ao an-tanàna ianao; Ny halavan'ny lamasinina dia 3-8 minitra.
Church of St. Gregory ilay Illuminator
Tempolin'i Sri Mariamman
Rivo-doza amin'ny Air-Terjun-Menusop
Miankina amin'ny tsindrim-peo
Fiangonana an'ny Jesuit
Vitaklin noho ny fahaverezan'ny fahavoazana
Hevitra ho an'ny Taombaovao ho an'ny kindergarten
Fandoavam-bola any Finlande
Karoka maitso - ahoana ny fomba hampitomboana tsara ny ao anatiny?
Oscar-2016: fandaharana sy mpandresy
Modular origami - cactus
Fitsaboana gardiasisan'ny ankizy
Fanafody simika amin'ny fanalan-jaza
Fiarovana zaza ho an'ny milina
Ahoana no hanamboarana tsaramaso ho an'ny garnish?
Sakafo eo amin'ny menaka ho an'ny fahaverezan'ny fahavoazana - sakafo
Inona avy ireo tombony amin'ny tsimparifary?
Tontolon'ny fandroana anatiny
Sakafo avy amin'ny laces
Fihaonana an-tariby - hevitra
Ny mikroflora amin'ny vagina